तपाई कति हिँड्नुहुन्छ ? यस्ता छन् बिहानीपख हिँड्नुका दर्जन फाइदा – Etajakhabar
तपाई कति हिँड्नुहुन्छ ? यस्ता छन् बिहानीपख हिँड्नुका दर्जन फाइदा
काठमाडौ – स्वास्थ्यका लागि हिडाईंका धेरै फाइदा छन् । यो एरोबिक अभ्यास हो । टेनेसी विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा पनि नहिड्नेभन्दा हिड्नेको शरीरमा बोसो काम भएको पाइएको थियो । हिड्दा शरीरमा रगत जम्न पाउँदैंन र मुटु रोग पनि लाग्न पाउँदैंन । यसका फाइदा के–के छन् ?
२. हड्डी मजबूत पार्छ : विशेषगरी ओस्टियोपोरोसिस रोग लागेकाहरुमा हिडाईले हड्डीको मासी कम हुनबाट बचाउँछ । महिनावारी बन्द भएका महिलाले दैनिक ३० मिनेट हिड्नाले हिप भाँचिने सम्भावना ४० प्रतिशतले कमी गर्ने पनि अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।स्वास्थ्य खबरपत्रिकामा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०५, २०७३ समय: ८:४४:२३